Shiinaha Automatic flat sheet sheet cidhiidhi wareegaya mashiinka wasakhda soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Lusheng
Mashiinka birta ah ee otomaatiga ah ee xajmiga ah ee mashiinka qashinka lagu nadiifiyo
Mashiinka qashinka birta ah ee birta ah oo otomaatig ah Burburrada ka dhasha geeddi-socodka shaabbadaynta, xiirashada, goynta leysarka, goynta plasma, goynta ololka, iwm. daloolada workpiece waxay ku guuleysan karaan saameyn yar oo R ah. Nidaamka howshu waa mid aamin ah oo la isku halleyn karo, shaqaduna waxay ku guuleysan kartaa tayo kaamil ah. Mashiinka wareega ee birta ah ee birta ah.
1. Hordhac mashiinka wasakhaysan birta:
Mashiinka wasakhda birta waa suun qallalan oo lagu daray afar nooc oo ah nooc isku-dhafan burush duudduuban oo caalami ah.
Mashiinka khashinka otomaatiga ah waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagula macaamilo cidhifka goobta shaqada, daweynta daloolka godka iyo xaqiijinta sawirka dusha sare ee birta, hoos u dhigida, nadiifinta iyo farsamaynta kale.
Mashiinka wasakhda xaashida bir birta otomaatiga ah Burrs ka soo ifbaxay geeddi-socodka shaabbaynta, xiirashada, goynta leysarka, goynta plasma, goynta ololka, iwm. Saxan bir otomaatig ah mishiinka kala bixiya ayaa laga saari karaa jihooyinka oo dhan hal mar, si markaa dhammaan cidhifyada iyo godadka goobta shaqada ay u gaaraan saameyn yar oo R ah.
Nidaamka wax-qabadku waa mid aamin ah oo la isku halleyn karo, shaqaduna waxay ku guuleysan kartaa tayo kaamil ah. Mashiinka wareega ee birta ah ee birta ah
2. Sawir gacmeed loogu talagalay mashiinka qashinka birta ah:
3. Xuduudaha farsamada ee mashiinka wasakhda birta:
Baaxadda waxsoosaarka ugu badan
Cabirka wax soosaarka Min
0.5-8m / daqiiqo
Dhererka miiska wax lagu karsado
Mashiinka guud ee cabirka
4. Codsiyada mashiinka qashin birta ah
5. Xirxirida iyo rarka mashiinka wasakhda birta:
Hore: Mashiinka Mashiinka Nadiifinta Mashiinka Mashiinka Xaraashka ee Manual
Xiga: Qalabka nadiifinta mashiinka nadiifinta Ultrasonic warshad otomaatig ah
Deburring Mashiinka Nadiifinta
Mashiinka Sifeeya Magnetic Deburring
Car Manual gacanta Car steel Laser Nadiifinta Mac ...
Qalabka nadiifinta Ultrasonic warshad otomaatig ah ...